Ifluorescent inyibilike iOxygen Transmitter abavelisi kunye nabaxhasi - China iFluorescent ichithwe iOxygen Transmitter Factory
Imitha ye-Oxygen echithwe kwi-Intanethi kwi-T4046
Imizi-mveliso ye-oksijini echithwe kwimizi-mveliso kukujonga iliso kumgangatho wamanzi kwi-intanethi kunye nesixhobo sokulawula nge-microprocessor. Isixhobo sixhotyiswe ngee-oksijini ezichithakeleyo ezibengezelayo. Imitha ye-oksijini echithwe kwi-intanethi sisilumkiso esomeleleyo kwi-Intanethi. Inokuxhotyiswa ngee-electrode ze-fluorescent ukufezekisa ngokuzenzekelayo uluhlu olubanzi lweppm. Sisixhobo esikhethekileyo sokufumanisa umxholo weoksijini kulwelo kulondolozo lokusingqongileyo kwimizi yogutyulo.
Ukuqhuba kwe-TDS Isenzi woluvo, Quadrupole Umsizi wokuSebenza woluvo, Isilumko seChlorophyll, Isenzi woluvo sokuSebenza kwe-Electromagnetic, Ph woluvo Electrode, Isilumko sokuSebenza kweTitanium,